चिन्तन चौतारी: खुल्ला भेटघाट
केही दिन अगाडि फेसबुकमा समसामयिक बिषयमा एउटा स्ट्याटस लेखेको थिएँ जसको टिप्पणी स्वरुप बिभिन्न अग्रज र मित्रहरुसँग भएको भलाकुसारीलाई यहाँ जस्ताको त्यस्तै राखेकोछु ।
Chandra Gharti Magar: माधव नेपालको बिकल्प प्रचण्ड नै हुन नसक्लान तर उनले प्रधानमन्त्रीको कुर्सी छाड्नैपर्छ । उनी राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न अयोग्य, असक्षम र असफल भैसकेको अवस्थामा कम्सेकम पनि अलिकती नैतीकताको आधार बचाइराख्नु नै भाबी राजनीतिका लागि बुद्धिमानी ठहरिनेछ । यो नै उनको राजनैतिक जीवनका लागि बाँकी गोरेटो या अन्धकार यात्रा हुनसक्नेछ । May4at 11:52pm
Comment You, Sabitri Gurung, Riya Mongol, Binay Pun and 18 others like this.
Shiwani Pant: तपाइले भनेको कुरा केहीहदसम्म लजिकलनै छ, तर नेपालीहरु घटनालाइ हप्तादिन नपुग्दै भुल्ने गर्छन् हैन ? त्यसैले तपाइले भनेको माकुनेको " राजनैतिक जीवनका लागि बाँकी गोरेटो या अन्धकार यात्रा हुनसक्नेछ..." भन्ने कुरा लामो अवधिपरक भयोजस्तो लाग्यो । यस भनाइले काम गर्ला र ?
Wednesday at 12:15am
Arun Thapa Magar: चन्द्र जि, यिनले भोली हेरेको छैन खालि ओलीको बोलीमा लोली मिलाको छ र देशलाई भड्खारोमा नै हाल्ने भारतिय योजनाको साथमा......
Wednesday at 12:17am
Pun Maya मगर: ke yo oli chor laai thokne himmat kohi sanga chhaina deshlaai andhakaar may banaune bekti nepal le khojeko chhaina....
Wednesday at 3:10am
Deepak K Khadka: स्थिति अझै पनि र झन् यो agitation पछि त अझ गाढा के हो भने State of Nepal versus Maoist. यस्तो अवस्थामा राज्यलाई थपक्क माओवादीको किस्तीमा राखिदिनुभनेको नामर्द मात्र होईन, अपराध पनि हो । माओवादीको domestication (माओवादी नागरिक राजनैतिक दलमा परिवर्तन नभएको क्षणसम्म नेपाल राज्यको रक्षा गर्ने जिम्मा बाँकी दलहरू र खास गरेर ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई छ । माओवादीलाई domestication गर्ने प्रयोजनको (जस्तो माओवादीलाई सरकारमा सामेल सम्म गर्ने) सम्झौता सम्म जायज हुनसक्छ, यद्यपि सडकले सरकार परिवर्तन गर्ने पद्धति यस घडीमा २००% नाजायज हो । तर माओवादीलाई सरकार सुम्पने काम नेपाल राष्ट्रको विरुद्ध घोर गैरजिम्मेवारी हो, घोर नामर्दपन हो ।
Wednesday at 7:13am ·
Subas Pokharel: Well said, Deepakjee!
Lapha Kauchamagar: maobadi pani distinctive ta hoina tara bartaman sarkar vanda dierai ramro. sidha najar baata herda mao baadiko activities positive vaya pani mao badil yati thulo janamatlai sambidhan banaunako lagi navayara aafno dirghakalin rananaitik yojanama kharcha gardai6a.
Wednesday at 11:28am
Bisheshwor Regmi: you r right Chandra G.
Chandra Gharti Magar: अरुण जी-माया जीको बिचार र दीपक सर-सुबास सरको बिचार नितान्त फरक कोणबाट फरक दंगले आएका छन । नेताहरुको भाषामा यसैलाई उग्रपन्थी र दक्षिणपन्थी भन्छन क्या रे, शायद । मानविय सम्बेदना पनि गुमाउदै गैरहेका नेता भनाउदाहरुको सिको गरे झै सच्चा नागरिकले पनि आरोप र प्रत्यारोपमा उत्रनु सहि होइन । हामीले स्विकार्नुपर्छ कि, नेपालमा सहमति बिना कुनै पनि दल बिशेषको चाहनामा एक इन्च पनि यताउता सर्न र गर्न असम्भव छ । ब्यक्तिको मनोमानिमा चल्ने त झन स्वत: काल्पनिक कुरा हुनेछ । यस अर्थमा पार्टीहरुले कसैले कसैलाई पनि निषेध गर्ने अवस्था रहेन । यस परिस्थितीमा बहुमतिय खेल त झनै हानिकारक हुनेछ । त्यसैले, प्रमुख प्रतिपक्ष तथा आन्दोलनरत एकिक्रित नेकपा माओवादीले माधव नेपालको बिकल्पमा प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने अडान र कांग्रेस-एमालेले माओवादी आन्दोलनलाई तुहाउन प्रतिकार र दमन गर्ने निती अख्तियार गरिरहेमा देश भड्खालोमा पुग्ने निश्चित छ । कटुवाल प्रकारणमा गथबन्धन दलहरुमै साझा सहमति हुन नसक्दा राष्ट्रपती समेट यस काण्डमा सामेल हुनेसम्मको दु:खद घटना पनि भयो । पारीणाम स्वरुप प्रचन्डको बहिर्गमन पश्चात माधव नेपाल कुर्सिमा पुगे । अब माधव नेपाल पनि आफ्नो कार्यकालमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न अयोग्य, असक्षम र असफल भैसकेको अवस्थामा नैतीकताको आधारमा राजीनामा गरेर सहमतिको बाटो खोल्नु उपयुक्त हुनेछ, जुन कुरामा उनकै दल एमाले पनि तयार छ । बर्तमान सरकार शान्तिप्रकृयालाई तुङोमा पुर्याउन र समयमा संबिधान जारी गर्ने बातावरण निर्माणमा चुकिसकेकाले सम्पूर्ण राजनैतिक दलहरु मिलेर निकास निकाल्नतिर गम्भिर रुपमा लाग्नुपर्दछ । अन्यथा, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धी त गुम्नेछ नै, देश पनि गृहयुद्धमा फस्नेछ । जसको भागीदार कुनै पार्टी र नेता मात्र होइन हामी जनता पनि दोषी हुनेछौ । हामी कहिल्यै उठ्न नसक्ने गरी द्वन्दमा पिल्सिरहनेछौ । मेरो बुझाईमा, यतिखेर हामीले कुनै नेता र पार्टीको समर्थन र बिरोध गर्नु भन्दा मिलेर संबिधान बनाउनका लागि दवाब दिनु अती आबश्यक छ ।
स्वप्निल जी, तपाईंको कुरामा सहमत छु । यो त हाम्रो समस्या नै हो त्यसैले त पटक पटक लोप्पा खुवाउदा पनि नचेतेर उनै भ्रश्तहरुलाई फेरी भोट दिएर अबिरमाला लगाउदै पठाउछौ । तर, म मेरो बिचारमा द्रिड नै छु, रहनेछु र कसैले पनि त्यो गल्ती नदोहोर्याउने आशा पनि गरेकोछु ।
आ-आफ्नो धारणा राखेर टिप्पणी गर्नु हुने र लाइक गर्नु हुने सम्पूर्ण अतिथी महानुभावमा धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु ।
Thursday at 12:06am
Deepak K Khadka: चन्द्रजी, निषेधात्मक राजनीतिको गुन्जाईसै नभएको, सहमतीय राजनीति नै बाटो हो भन्ने तपाइको ठम्याई एकदम सही हो । तर समस्या कहाँनेर भने माओवादी नै यस दृष्टिसंग सहमत र सहदृष्टि राख्दैनन् !
माओवादीको राजनैतिक लक्ष, रणनीति, कार्यनीति र कार्यक्रमहरूबारे तपाईको अवलोकन र निष्कर्ष के हो म जान्दिनँ, तर मैले देखेसम्म अहिलेसम्म के कुरा छर्लङ्ग भइसकेको छ भने, माओवादीको नीति भनेको duplicity र confusing inconsistency अनि लक्ष भनेको अधिकतम निषेध ।
माओवादीहरू खेलको नियम लगातार बदलिरहन्छन्, कुरा लगातार फेरिरहन्छन्, अडान लगातार फेरिरहन्छन् – अरूहरुलाई उनिहरूसंग deal गर्न कुनै consistent नियमै छैन बाबा । माओवादीको यो चाल “बौद्धिक गुरिल्लायुद्ध” हो, plain and simple.
त्यसकारण अहिले उनिहरूले माँगेको चकलेटले उनिहरू खुशी भएर consistency र सहमतीय राजनीति गर्न थाल्नेछन् भन्ने खालको सुझाव pretty naïve देख्छु म ।
Consistency को कुरा छोडिदिऔं । सहमतीय राजनीतिको कुरा नै गर्ने हो भने, माओवादीको पोल्टामा असहमतीहरूको यति धेरै ग्रिनेडहरू (उनिहरूको राजनैतिक दस्तावेजहरू, संविधानसभामा राखेका प्रस्तावहरू पढे पुग्छ, राम्रो आकलन गर्न सकिन्छ) छन् कि त्यसलाई अहिलेको चकलेटले neutralize गर्ने होईन, झन् usable बनाइदिन्छ ।
माओवादीलाई सहमतीय राजनीतिमा सहमत गराउन वा एउटा predictable र consistent player बनाउनको लागि मात्त पनि अहिले माओवादीलाई खेलको नियम बिगारेर चकलेट दिने होईन चकलेट नदिएर खेलको नियम बताउने हो ।
माधवनेपालले शक्ति र आत्मशक्ति कति छ र आगे के के हुन्छ म भविष्यवाणी गर्न सक्दिनँ । तर डटेर कसैले माओवादीलाई खेलको नियम बताइदिए, बुझाइदिए भने त्यो सबैको दीर्घकालिन कल्याणमा छ ।
Thursday at 5:10am
Subas Pokharel: चन्द्रजी: "...नैतीकताको आधारमा राजीनामा गरेर सहमतिको बाटो खोल्नु उपयुक्त हुनेछ" भन्दै तपाइंले फेरी माओबादीकै नारा दोहोर्याउनु भयो| यहाँ, फेरी ऊही प्रश्न उठ्छ कि, लोक तान्त्रिक पद्दतिमा प्रधान मान्त्रिको राजिनामा माग्ने (सरकार फेर्ने) आधिकारिक ठाउँ कुन हो; जन्-निर्वाचित संसद कि सडक? अनि, कसैको नैतिकताको यह्सास दिलाउने उत्तम र शभ्य उपाय सडक संघर्ष नै हो त! तपाई भन्नु हुन्छ "...यतिखेर हामीले कुनै नेता र पार्टीको समर्थन र बिरोध गर्नु भन्दा मिलेर संबिधान बनाउनका लागि दवाब दिनु अती आबश्यक छ", हो तर, बिगत दुई वर्षमा एक बर्ष भन्दा बढी संसद नै चल्न नदिए देशलाई अनिर्णयको बन्दि कसले बनायो? संसादमा सबै भन्दा ठुलो हुँदा हुँदै पनि,संबिधान बनाउनेमा सबै भन्दा असहयोगी भूमिका माओबादीले देखाएको हो कि होइन? त्यति खेर यो 'दबाब' को शोच किन आएन? बिचार भिन्न भिन्न हुन सक्छन, बिश्वास फरक फरक हुन सक्छन तर, संसदीय पद्दतिका सर्बमान्य शिद्धान्तहरु एकै छन् र हाम्रो अन्तरिम बिधान पनि एउटा नै|
Thursday at 7:52am
Basanta Sharma: कसैकसैलाई आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएकोमा निद हराम भएको छ, उनीहरू आन्दोलन भड्केको नाममा नेपाली जनतामाथि सेनाको बुट बजार्न बाटो हेरेर बसेका छन्, जतिसुकै प्रचार गर आन्दोलनमा प्रतिकारको - नेपाली जनता शान्ति चाहन्छन् ।
Thursday at 11:49pm ·
Chandra Gharti Magar: दीपक सर, राजनीतिक कुरा गर्नु मेरो उद्देश्य होइन, मेरो क्षेत्र पनि होइन तर नेपाली राजनीतिमा देखिएको बर्तमान अस्थिरताले सबै नेपालीलाई चिन्तित तुल्याएकोछ । जब राजनीति नै सहि ट्र्याक बहिर पुग्छ त अरु सबै क्षेत्र पनि लथालिङ र अङभङ हुन पुग्दोरहेछ, जुन हामीले देखि भोगिरहेका छौ ।
जहासम्म तपाईंले माओवादी पार्टीको निती भनेको duplicity र inconsistency नै हो भन्ने बिचार राख्नुभा'छ त्यस बारे मैले केही बोल्न चाहिन किन कि सैद्धान्तिक कुराहरुको व्याख्या बिश्लेशण नगरेर बोल्दा अपाङ्ग र अपूर्ण हुन्छन भन्ने मलाई लाग्छ । यहाँ त्यसरी लेख्न असमर्थ छु, मैले सकिन अर्थात गरिन । मैले व्याबहारिक तरिकाले सोझो रुपमा बुझ्दा ठीक बेठिक फरक अर्थ पर्न जानसक्छ । तर यत्ती भन्न चाहन्छु, कुन पार्टीको कुन नेताले के गर्दैछ भन्ने याका जनताले गरिरहेकै छन भन्ने लाग्दछ । एउटा नागरिकको हैसियतले उनिहरुको परीक्षण र निरिक्षण मैले पनि अबश्य गरिरहेको छु र गरी रहेको हुनेछु । मैले त्यसलाई नागरिकले नैसर्गिक अधिकार प्रयोग गरेको भन्ठान्छु ।
सुबास सर, तपाईंले धेरै महत्वपूर्ण कुराहरु उठाउनु भएकोछ तर पनि मैले मुख्य गरी दुई वटा कुरामा मात्र आफुलाई लागेको कुरा स्पस्ट पार्न चाहन्छु । असहमतिका लागि माफ गर्नुहोला ।
मैले नैतीकताको कुरा गर्दा तपाईंले सजिलै माओवादीको नारा बोकेको आक्षेप लगाउनु भयो, जुन मलाई आत्मैदेखी अस्विकार्य छ र अली बदी नै मर्माहत पनि गरायो । हुन त राजनीतिमा नैतीकताको आशा गर्नु हुन्न भन्ने तपाईंको आशय हुनसक्छ तर म त राजनीतिज्ञ अझ बदी नैतीकवान हुनुपर्छ भन्ने भावना राख्ने बेयकुफ परे । तर मलाई एउटा उदाहरण दिन मन लाग्यो । २०३१ सालमा कर्मचारीको सानो लापरबाहिले सिंहदरबारमा आगो लाग्यो रे । त्यो पञ्चायत कालमा तुल्सी गिरी प्रधानमन्त्री थिएँ रे । राती सिंहदरबारमा आगलागी भएको खबर पाएको १५ मिनेटमै उनी त्यहा पुगेर दनदनी बलिरहेको आगो निभाउन सकेको कोशीस गरेछन । दरबारको अधिकांस भाग जलेर निकै क्षती भएकोथियो, त्यस कमजोरिको जिम्मेवारी लिदै तुल्सी गिरीले नैतीकताको आधारमा तत्कालिन राजा बिरेन्द्रलाई राजिनामा बुझाएछन । राजाले राजिनामा फिर्ता गराउन धेरै प्रयास गर्दा पनि उनले नैतीकताकै कुरा दोहोर्याएछन । अन्तत राजिनामा स्विक्रित भएछ । अब निरन्कुश भनिने पञ्चायतकालिन प्रधानमन्त्री तुल्सी गिरी र गणतान्त्रिक नेपालका माधव नेपाल बिचको नैतीकताको दुरी आफ्नै बुझाईले नाप्नु बेस होला । मैले त अझै पनि नैतीकताको अपेक्षा गरिरा'छु । मलाई लाग्छ, तपाईंले त पञ्चायत शासन पनि भोगेकै हुनुपर्छ, मैले त सुनेको मात्र ।
प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्ने ठाउँ अबश्य पनि सडक होइन, सदनमै हो । भलै, सदनमा सरकार दाल्न सांसद किनबेच भए पनि, पुरुष सांसदले सुत्केरी भत्ता लिए पनि, आफ्नै नेतालाई पराजित गर्न बिभिन्न प्रपञ्च रचे पनि, पर्दा बाहिर र पर्दा भित्रको घटना र परिघटनाको आधारमा हामीले नाङेझार पार्न सक्छौ । हामीले ति खराब र भ्रश्तहरुलाई सुधार्न र तिरस्कार गर्न सक्छौ । यदी त्यसरी नै भन्ने हो भने त प्रतिपक्षले सडकबाट बिरोध गर्न पाउनु पर्ने हक पनि त सुरुक्षित नै हुन्छ । लोकतन्त्रमा बहुमतको हिसाव हुनुपर्छ, त्यो लोकतान्त्रिक बिधी हो तर कम्सेकम यती चाडै त्यहासम्म पुग्न हतार नगर्नु राम्रो भन्ने मेरो चाहना हो । यसर्थ, मैले माथि पनि उल्लेख गरेकोछु कि अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि दलले कसैलाई पनि पाखा लगाउन सक्दैन त्यसैले बहुमतिय खेलले देशलाई फाईदा गर्दैन, बरु दुर्घटना निम्त्याउनेछ । अहिलेको समस्या समाधान गर्न, संबिधान लेखेर जारी गर्न, शान्तिप्रकृयालाई टुङोमा पुर्याउनका लागि अपनाउनु पर्ने मार्ग भनेको आपसी मेलमिलाप नै हो । मैले देखेको एउटै निर्बिकल्प बिकल्प भनेको सहमतिय राजनीति नै हो । तर सहमति शब्द जती प्रिय छ, व्यबहारमा त्यती नै गाह्रो रहेछ । नेताहरुको भित्री इच्छामा त्यो नपलाउदो रहेछ, जसलाई मैले देश र जनता प्रती गरेको अप्रत्यक्ष अपराध र गैरजिम्मेवारीपन सम्झेकोछु ।
अर्को कुरा रह्यो दवाबको ।
तपाईंले मलाई प्रश्न राख्नु भएकोछ, मानौ म माओवादीको कुनै बरिस्थ नेता हुँ । हिजो म कहाँ थिए र तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो भन्ने हामी आँफैलाई मात्र राम्ररी थाहा होला । म त त्यतिखेर पनि देश बिगार्नेहरुलाई खबर्दारी नै गर्दै थिएँ, तपाईं कहाँ हुनुहुन्थ्यो त्यो मेरो चासोको बिषय भएन किन कि हाम्रो भेट यो नै पहिलो हो । मैले तपाईंतिर फर्किएर चोर औंला उठाउने प्रयास गर्दैन र कहिल्यै गर्नेछैन पनि । यदी म कहाँ थिए भन्ने जानकारी लिनै चाहनुहुन्छ भने मैले यहाँ भन्नु भन्दा कृपया मेरो पुरानो स्ट्याटस हेर्नुहोला, मेरो नोट्स पनि चियाउनु होला, अझै बदी समय छ भने मेरो ब्लगतिर पनि छिर्नु होला । त्यसपछी पनि "त्यतिखेर दवावको सोच किन आएन ?" भन्ने कुरामा चित्त बुझेन भने फेरी प्रश्नोत्तर गरौला, जिज्ञासाहरु मेटौला ।
एउटा स्वतन्त्र र स्वतन्त्रै रहिरहन चाहने ब्यक्तिलाई कुनै पार्टी बिशेषको पगरी गुथाउनुको पिडाबोध शायद तपाईंले गर्नु भएको छैन होला । त्यसैले यती निर्मम प्रहार गर्न अलिकतिसम्म पनि हिच्किचाउनु भएन । देश लामो सन्क्रमनकालिन अवस्थामा बन्दी भएको अप्ठ्यारो घडीमा निकास र बिकासको कामना गर्दा कहिले माओवादी, कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले हैन भन्दै प्रतिवाद गरिरहदा साह्रै दु:ख महशुस हुदोरहेछ । तर नेपाल र नेपाली अस्तब्यस्त परिस्थितीमा गुज्रिरहदा म निरिह बनेर टुलुटुलु हेरिरहन सक्दैन । म आफ्नो कर्तब्यलाई भुसुक्क बिर्सन सक्दैन । फलस्वरुप बन्द हदताल नगर, नेपाल बन्द नगर, जनतालाई दु:ख नदेउ, सुशासन देउ, गरीबगुरुवाको छाक कातेर भ्रस्तचर नगर, जनताको विश्वाशमा नखेल, नेपालीहरु पूर्व नफर्किउ, पश्चिम नतर्किउ, उत्तरका गोरो र दक्षिणका कालो भन्दै बिभाजन नहौ, यस्तै यस्तै मेरो कामना हो, आवाज हो । हो, मेरो एउटै मात्र स्वार्थ छ, सुन्दर शान्त र सम्रिद्ध नेपाल र सुखीखुशी नेपाली देख्ने चाहना ।
आ-आफ्नो बिचार राखिदिनु भएकोमा श्रद्देय दिपक सर र सुबास सर, यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद ।
Yesterday at 1:23am
Deepak K Khadka: चन्द्रजी, खास गरेर तपाईले आफ्नोबारे दिनुभएको परिचयबाट औधी खुशि छु । तपाई र म एउटै प्रजाती (independent) का रहेछौं । तपाईसंग विचार विनिमय गर्न म झन् रौसिएको छु र त्यो यथाअवसर हुँदै जानेछ भन्ने आसा लिएको छु ।
अहिलेलाई दुई संक्षिप्त कुरा राखेर विदा माग्दछु । मैले माओवादीको नीति duplicity र confusing inconsistency हो जो भनें त्यो उनीहरूको general tactics लाई भनेको हुँ र यो कुरा लगभग निर्विवाद नै छ । माओवादीको tactics लाई नजिकबाट अध्ययन गर्नेले जोकोहीले त्यो निष्कर्ष सजिलै निकाल्न सक्तछन् । र भनिहालें यो गुरिल्ला युद्धको बौद्धिक भर्सन हो । र रोचक कुरा के छ भने it is working for them. यसमा यत्ति नै ।
एउटा अर्को कुरा । केवल जिज्ञासा है । तपाईले केही अगाडि “जनयुद्ध र जनआन्दोलनको उपलब्धी” भन्ने वाक्यांश प्रयोग गर्नुभएको थियो । जनयुद्धको उपलब्धी भनेर केलाई भन्नु/सोच्नु भएको हो, त्यो जान्ने चाहना छ मेरो । र यो कुराकानी सार्वजनिक रूपमा गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन है । हामी प्राइभेट कुराकानीमा यस विषयमा कुरा गर्न सक्छौं । तर यति चाही यही राखिहाल्न चाहन्छु, जनयुद्धको उपलब्धी भनेको सबै नकारात्मक छ, यति धेरै र यति नकारात्मक कि ती सबैलाई एक एक गरेर उल्ट्याउन पर्ने, सच्च्याउनुपर्ने, पुनर्निमार्ण र पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने, निको पार्न पर्ने, खालका छन् र ती जरूर भएर छाड्नेछन् पनि । यति हो कुनै केही वर्षमा होला, कुनै थुप्रै समय लाग्लान् । कुनै सजिलो होला, कुनै खर्चिलो होला, के अर्थमा भने यी अधिकांश कुराहरू माओवादी विरोधीले मात्र गर्नसक्ने खालका र अवस्थाका देखिन्छन् । हवस् त, फेरि फेरि कुराकानी गरौंला ।
Yesterday at 4:09am
Subas Pokharel: चन्द्रजी, "प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्ने ठाउँ अबश्य पनि सडक होइन, सदनमै हो" भन्ने मूलभूत कुरोमा हामि दुवै सहमत भैयो, मलाई खुसि लागेको छ| अर्को कुरो "माओबादीकै नारा दोहोर्याउनु भयो" भन्नु भनेको तपाइँ चन्द्रजी माओबादी हुनु भयो भनेर आरोप लगाउन खोजेको कदापि होईन, आन्यथा नलियिदिनुहोला| सबैलाई राजनीतिक दल बिशेषको बिल्ला भिराउनु जायेज हुँदैन भन्ने मेरो पनि मान्यता हो|राजनीतिमा नैतीकताको आशा गर्नु हुन्न भन्ने मेरो आशय कदापि होइन बरु म पनि तपाई जस्तै ".. राजनीतिज्ञ अझ बदी नैतीकवान हुनुपर्छ भन्ने भावना राख्ने बेयकुफ" परें| यसरि हेर्दा, तपाई संग मेरो बिमति केहि छैन| २०३१ सालमा डा. तुलसी गिरीले राजिनामा गरेको घटना स्मरण रहेछ, सौभाग्य भन्ने कि संयोग, म काठमान्डू मै थियां| पहिलो जम्का भेट मै येत्ति भाला कुसारी भयो, फेरी फेरी पनि भेट हुनेनै छ, हस् त!
Chandra Gharti Magar: जनयुद्धकालमा समाचारमा करोडौका भौतिक संरचनाहरु ध्वस्त भएको खबर सुन्दा पद्धा र आफ्नै आँखाले दर्जनौ लाशहरु देख्नु पर्दा निकै दु:ख लाग्थ्यो, लाग्ने गर्छ । अझै मलाई त सफाया, जनकारबाही, आतंककारी, मृत्यु, शब्दहरुले निकै बेचैन बनाउथ्यो । कहिले काही आफ्नै आँखाले ति अबोध टुहुरा टुहुरीको निर्दोष आँखामा हेर्नु पर्दा, असहाय बुदाबुदीको आसुँ बगेको साक्षी बस्नु पर्दा म धेरै पटक शब्दहिन भएको तितो अनुभव पनि संगालेको छु । साँच्ची कहिल्यै सन्चो नहुनेगरी मुटुमा गडेर बसेकाछन, ति गहिरा चोटहरु ।
समय मिलेको बखत रोल्पाका कुना काप्चातिर पनि पुगेकोछु । अशिक्षित ति गाउँलेहरु राष्ट्रिय राजनीतिसँग साक्षर रहेको र बर्गचेत तथा अधिकारका लागि सचेत पाउदा औधी खुशी पनि लाग्छ । त्यतिखेर मलाई मान्छेले 'पढेर भन्दा परेर बुझ्छ' भन्ने सत्य नै रहेछ भन्ने लाग्थ्यो ।
दश बर्षिय युद्धका घाउहरु कहिल्यै खट बस्न सक्दैनन, भौतिक क्षतीहरु पनि भर्खरै पुर्ती हुन सक्दैनन तर पनि हिजोका ति बिषम दिनहरुलाई बिर्सिएर, एक आपसमा तुष नराखेर एकै परिवार मिलिजुली फेरी देश निर्माणमा जुट्नु पर्दछ भन्ने मेरो मान्यता छ । युद्धका फाईदा र बेफाईदा तुलोमा जोखे जसरी हिसाव निकाल्न असम्भव छ जस्तो पनि लाग्दैन । म जस्तो काँचोले को कती ठीक र कती बेठिक भन्ने कुरा निर्क्योल गरिसक्ने क्षमता पनि अहिले मसँग छैन । मेरो बिचारमा मुख्य कुरा हामीले बिगतबाट कती, कस्तो र कसरी पाठ सिक्ने भन्ने नै हो । म त्यही मानसिकतामा छु र त्यसैको पक्षपाती पनि हुँ ।
दिपक सर, हुन त मैले तपाईं जस्तो उच्च ब्यक्तित्वसँग यि यस्ता कुराहरु गर्न सुहाउन्न तर सानो जिज्ञासा भनिहाल्नु भयो त्यही मेसोमा पन्छिनु भन्दा यती भन्नु आफ्नो कर्तब्य सम्झिएर मात्र लेखि हालें । माफ गर्नु होला ।
दिपक सर, सुबास सर,
तपाईंहरु मभन्दा धेरै नै पाको हुनुहुन्छ, उमेरमा, बिचारमा, व्यबहारमा, । तपाईंहरुको सटिक बिश्लेषण र बौद्धिकताको सम्मान गरेकोछु र गरिरहनेछु । मैले तपाईंहरुसँग तर्क र बहस गरेको होइन, सिकेको हुँ भन्ने सोचेको छु । तपाईंहरुले पनि म एउटा चिचिलोलाई परीपक्क बनाउन सिकाएको रुपमै लिनुभएकोछ भन्ने बुझेकोछु । हाम्रो आउने दिनहरुमा पनि यसरी नै सिक्ने र सिकाउने प्रकृया चलिरहनेछ भन्ने आशा गरेकोछु । मैले भुलबस या अन्जानमा कुनै अप्रिय शब्द लेखेको रहेछु भने क्षमा गर्नुहोला । मेरो सानो स्ट्याटसमा कमेन्ट गरेर यत्ती धेरै कुराहरु राखि दिनु भएकोमा आभारी छु । हाम्रो भेट भै नै रहोस् भन्ने कामना सहित बिदा माग्न चाहन्छु ।
Posted by Chandra Magar at 1:29:00 PM
Nepalean May 8, 2010 at 8:03 PM
ramro chha blog. script ali milaunu hola.